トップページ ＞ 言語 ＞ ズールー語 ＞ Engikwenzayo Uma uhlangana umphefumulo wethu angamawele?
Twin Soul kuyinto bangempela [3500 yen asihlole Mahhala] ukuze izangoma ka ukuthola indlela
umlingani wakhe akubalwa siphile njalo ngenkathi eyodwa kanye ezweni elifanayo. Ngokuvamile iphindwa ukuhamba nge eceleni uyaphila. Ngisho noma sakwazi ukuhlangabezana umphefumulo twin kuleli zwe ngayo ingaba seduze isimangaliso, futhi kubuye incwadi yelifa emphefumulweni nomunye selingaphezu isigaba ephakeme ngokusebenzisa lolu sizi.
Ngakho-ke, mina sihlangane nabantu ababonakala umphefumulo ayiwele naye, injabulo Ase okumsulwa ukuthi ngakwazi ukuhlangana umlingani wakhe. Lapho ngihlangana hhayi kuphela bebodwa, kufanele sijabule ukuba isitha babuyelana. Lowo muzwa ngokwethembeka uzwakalise, by Okusizayo beqaphela ukuthi kuyinto umphefumulo ukuthola izinto ezimbili abantu nomunye, ingabe umphefumulo ezazingontanga bazulazula phakathi amanga isikhathi eside kakhulu phakathi lula uqhubeke ubheke injabulo babe munye.
twin Seoul njengoba lapho kokubili
? eyodwa noma nishade indaba ezivamile
twin Seoul ozithola kwalowo umuntu oshadile, kuthiwa uma umphefumulo selingaphezu unqobe yizinselelo wena. Ngenxa yalesi sizathu, ngokuvamile senzakalo isikhathi kuba nxa usufike ukuphila ezithile degree. Lapho ngihlangana Yindaba ezivamile futhi yokuthi oyedwa noma bobabili base beshadile.
abaphikisi noma ubuso bakhe ngokucophelela ngaphambi egijima ubuhlobo, ngisho kuleli cala abalingani ithengwa noma, ngeke ukwazi ukuyeka umphefumulo twin ukuheha nomunye. Nokho, kufanele ugweme kusukela ukubanjwa ndaba, ukukuziba lokho umlingani ukhona manje. Okokuqala, ubhekene kusukela ngaphambili isiphetho bebodwa, kufanele siqhubeke kancane ngokucophelela ukuxazululwa abantu ababili. Lokhu futhi ibhekwa sizi onikezwe umphefumulo ayiwele naye, ake uthole phezu ukuze uthole indlela engcono kakhulu.
? isiphetho ahlangane
umphefumulo twin ukuthi awazi ukubaleka futhi avikele ukuze cishe isimangaliso, ngahlangana Kusukela yokuthi bazizwa negalelo elinamandla ngesikhathi, kukhona icala ukuthi kuholele esibalekile ngobulukhuni benhliziyo yami ngiye ngibe nomuzwa wokuthi kuyinto isiphetho. Kodwa akukhona nje is phetho izwi njengoba isihlangu. Ngoba isiphetho, engizama Omoikomo ukuthi kufanele abantu ababili oniwa ezizungeze nindawonye.
njengoba kuchaziwe ngenhla, isimo ukuthi ungaboshwa ngisho ufuna alibophe uhlolo eyanikezwa abantu abaneminyaka emibili. Nginqobe kwalesi siyaluyalu, futhi ukuze ikhule ephakeme umphefumulo komunye nomunye, nje ukwamukela kahle isimo kunokuba esasibalekile, kungcono kubalulekile ukuhlela.
hhayi kuphela uthando nomshado nomphefumulo twin umgomo, hhayi ngempela ube sesimweni lapho ixhunywe ngokuvumela anyuke njengoba ngahlangana umphefumulo abangamawele. Yiqiniso, kungokwemvelo ukuba baveze phambi injabulo kulokho aye ahlangana, uma kungekhona kahle imvelo ngoba uma abantu ababili zibambene, kubalulekile ngokuqinile babhekane nesimo.
Ngaphezu kwalokho, uthando kuphela ubuhlobo noma umshado njengesibopho indlela ukuhamba umphefumulo twin akuyona umgomo. Kungaba omunye izinhlobo uya nomunye imikhondo njengoba umngane eliyingqayizivele.
Uma kungenjalo, kubalulekile ngokuqinile babhekane nesimo.